Fiarovana ara-tontolo iainana | Reef Resilience
Ny fiarovana ara-tontolo iainana dia manondro ny fahaiza-miaina ara-tontolo iainana iray mba hihazonana ny asany sy ny dingana lehibe eo anatrehan'ny adin-tsaina na ny tsindry, amin'ny fanoherana sy ny fanolorana ny fanovana. ref Ny fiarovana ny tontolo iainana dia manara-penitra toy ny azo avaozina, mavitrika, ary afaka miatrika ny fiovana sy ny tsy fahazoana antoka. ref
Ny fametrahana ny fahantrana amin'ny tontolo voajanahary dia midika fa miasa ho fanohanana ny fahasalamana sy ny asan'ny habaka, ny zavamananaina ary ny tontolo iainana. Ny fiasa ara-tontolo iainana izay mihazona ny akora fiaran-dalamby sy ny fanohanana ireo vondrom-piarahamonina matanjaka amin'ny vatohara dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny fihazonana ny fahalemena amin'ny korontana lehibe. Ny fifandraisana amin'ny sakafo amin'ny tranokala (ohatra, herbivory, trophic cascades), cycles de reproduction, ny fifandraisana eo amin'ny mponina, ary fandraisana mpiasa dia dingana ara-tontolo iainana miavaka izay manohana ny fahaverezan'ny tontolo voajanahary toy ny haran-dranomasina.
Ny rafitra ara-tontolo iainana izay marefo dia mampiasa fomba sy fomba maro samihafa hiatrehana sy hanatsarana ny fiovana. Ho an'ny rafitra momba ny tontolo iainana, ny fiovan'ny zavamananaina ary redundant functional dia afaka manampy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana kokoa ny tontolo iainana. Ohatra, ny vondrom-piarahamonina misy vatohara misy fanamafisana ara-dalàna dia mety hanana vintana tsara kokoa ho an'ny fahasitranana raha toa ka very ny karazana iray fikambanana. Noho izany, fanaraha-maso ary mitarika fikambanana, toy ny hazandrano voajanahary, dia afaka mandray anjara mavesa-danja amin'ny fanamorana ny fanarenana vatohara aorian'ny fanelingelenana lehibe. Amin'ny rafitra sosialy, ny fitantanana ny harena sy ny rafitra fitantanana dia afaka manatsara ny fahavitrihana amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny fampiasana ny harena voajanahary sy ny famporisihana ny fivelomana hafa. ref Jereo ireo fizarana manaraka ao amin'ny Coral Reef Resilience sy Management Strategies ho fampahalalana misimisy kokoa momba ny fitantanana ny harena an-dranomasina ho an'ny haran-dranomasina mba hanohanana ny faharetana.